Ekpere ịchọta ihe furu efu. ? Ma zuuru [San Antonio]
Kpee ekpere ka ị chọta ihe ndị funahụrụ gị Ọ dị ezigbo mkpa n’ihi na ọtụtụ mgbe anyị na-ahụ onwe anyị n’ọnọdụ ndị ihe ụfọdụ funahụrụ anyị dị ka igodo ụlọ ma ọ bụ ihe ndị ka mkpa dị ka ego.
Nke bụ eziokwu bụ na ịnwe ekpere a nwere ike inyere anyị aka ọ bụghị naanị ịchọta ihe ndị funahụrụ anyị kama ka anyị mee ka obi dị jụụ n’etiti usoro ọchụchọ niile ebe ọ bụ na ọ nwere ike bụrụ oge nsogbu ebe ndidi na nwayọ na-enweghị oge mana nke ahụ. Site n’ekpere anyị nwere ike ịlọghachite iche echiche ma rụọ ọrụ nke ọma.
1 Ekpere ichọta ihe ndi furu efu Gini bu senti?
2 1) Ekpere San Antonio n’efu ihe
3 2) Ekpere ka ichota ihe ndi San Cucufato
4 3) Ekpere ka ichoputa ihe ndi batara
4.1 Enwere m ike ịnye oriọna mgbe m na-ekpe ekpere?
4.2 Kedụ mgbe m nwere ike ịrịọ ekpere maka achọta ihe efu?
Ekpere ichọta ihe ndi furu efu Gini bu senti?
San Antonio Ọtụtụ ndị mara ya dị ka senti nke ihe furu efu n'ihi na ya onwe ya, mgbe ọ dị ndụ, bụ onye akaebe na-eme ihe ụfọdụ siri ike nye aka mmadụ.
Ndụ nke senti a bụ ọrụ ebube site na mmalite ruo na njedebe,, maka ihe ndị a niile, ọ ghọrọ onye enyemaka dị ukwuu nke ndị mmadụ na-eche nsogbu nke ọnwụ nke ụfọdụ ngwongwo.
Otu ekpere ndi ozo n’eme ka okwu ndia bu San Cucufato dika nke a bu onye kwusara ozi oma n’ebe di anya ma obu na odigh onye obula anwa anwa ịga.
Etinyela ekpere n'ime ya n'ihi na, ya na San Antonio, ọ ghọrọ onye inyeaka dị ike na azịza ya ziri ezi ma zie ezie nke na ọ tụrụ ha n'anya.
1) Ekpere San Antonio n’efu ihe
«Saint Anthony, ohu Chineke dị ebube, onye ama ama maka ọrụ gị na ọrụ ebube dị ike, nyere anyị aka ịchọta ihe ndị furu efu; nye anyị aka gị n'ule, ma mee ka uche anyị nwee ọchichọ nke uche Chineke.
Nyere anyị aka ịchọpụta ọzọ amara nke mmehie anyị bibiri, ma duru anyị gaa inweta nke ebube nke Onye nzọpụta.
Anyi na ario nke a maka Kristi Dinwenu anyi.
Enwere ike ikpe ekpere a n’oge ọ bụla ma ọ bụ n’ọnọdụ ọ bụla n’ihi na San Antonio na-a alwaysa ntị mgbe niile n’arịrịọ ndị ya na-arịọ ya ma ọ bụrụ na ọ na-arịọ maka ọrụ ebube akpọrọ azịza na-abịa ọsọ ọsọ.
Cheta na ekpere dị ike na ha bụrụ ngwaagha nzuzo anyị nwere ike iji oge ọ bụla anyị chọrọ n’ihi na naanị ihe a chọrọ bụ inwe okwukwe.
2) Ekpere ka ichota ihe ndi San Cucufato
Etufurula m ya (kwuo ihe furu efu), Achọrọ m inwetaghachi ya, ọ bụrụ na anwụghị m tupu na njịkọ a ana m eme bọọlụ gị, San Cucufato, ma kegide aka ekpe, ruo mgbe (kwuo ihe furu efu) n'aka m ka m laghachi. Amen
San Cucufato bụ otu n'ime ndị nsọ kachasị ike anyị nwere ike ịgakwuru n’oge obi nkoropụ na oke nhụjuanya mgbe anyị na-ahụghị ihe anyị.
N’agbanyeghi otu anyi si cho ihe siri ike, ndi a bu ekpere di ike nke apuru ime n’oge obula.
3) Ekpere ka ichoputa ihe ndi batara
«Chineke ebighi ebi na Nna dị ike, Onye nwe eluigwe na ụwa, onye site na Jizọs Kraịst, Ọkpara gị, na -ekpughere onwe gị ndị ogbenye nye ndị dị mfe na ndị dị umeala n'obi, anyị na -ekele gị n'ihi na i jiri ịhụnanya gị jupụta Saint Aparicio gọziri agọzi. ịdị mfe nke obi na -achọ inweta ngwongwo nke eluigwe.
Na-enye nke ahụ site na ịrịọ arịrịọ ya, anyị erute ihe anyị rịọrọ, na aka ya dị ike ga-anapụta anyị ozugbo enwere ike ihe anyị furu efu ma ọ bụ zuru ihe anyị.
(kwughachi ihe ịchọrọ iji naghachi)
Nna anyị na-eto ma gọzie gị ma anyị na-ekele gị maka na anyị ma na ị na-ege anyị ntị, na ebere gị enweghị njedebe, anyị na-arịọ gị ka ị licaa ntị n'arịrịọ anyị ma nyere anyị aka na ndị a rịọrọ, yabụ, kasie anyị obi na nhụjuanya anyị, anyị na-atụgharị uche ebube dị iche iche nke ike gị.
Anyị na-arịọkwa gị ka ị nwekwuo okwukwe na ọrụ ebere anyị, na, na-agbaso ihe nlereanya nke ekpere na ntinye nke Saint Aparicio dị ngọzi, anyị ga-eto gị mgbe niile.
Site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị. Amen. "
Ekpere a ka anyi choo ihe ndi furu efu ma obu ihe zuru ike.
Okwu Chukwu kuziri anyi otu esi ekpe ekpere, na amaokwu ya anyị na-ahụ ọmụmaatụ nke enweghị atụ nke okwukwe ebe, na otu ekpere, ka enwetara ọrụ ebube dị ịtụnanya.
Nke a bụ ihe mere na anyị ekwesịghị iwepu ekpere ahụ maka na ike ya siri ike. Naanị ihe a rịọrọ n’ekpere ka inweta azịza a na-arịọ bụ ka o jiri okwukwe mee ya, kwere na a ga-enye ya ihe anyị rịọrọ.
Onwere ndi eji eme ekpere ebido otutu ubochi ma obu oge doro anya, mana nke bu eziokwu bu na nke a dabere na ihe onye obula doziri n’obi ya, nihi na nke ahu kachasi mkpa.
Enwere m ike ịnye oriọna mgbe m na-ekpe ekpere?
Okwu banyere kandụl dị ezigbo mkpa ma azịza ajụjụ a bụ ee.
Kandụl kandụl adịghị ike kama ha na-enyere aka mee ka gburugburu ebe obibi dịkwuo mma ma bụrụ ndị a na-ewere dị ka onyinye maka ndị nsọ anyị n'ihi na iji ha chọrọ itinye ego nke agbanyeghị na ọ bụ obere ihe. Okwukwe na atọgbọ
Kedụ mgbe m nwere ike ịrịọ ekpere maka achọta ihe efu?
A ga na-ekpe ekpere n'oge ọ bụla n'ụbọchị na ebe achọrọ ya.
Enweghị oge a kapịrị ọnụ Nke a zuru oke, n’agbanyeghi, enwere otutu ndi na-ekwu na ikpe ekpere ututu di ike.
Inwe ike ikpe ekpere ebe ọ bụla na oge ọ bụla ekpere na-eji ngwa ọgụ anyị kacha mma, anyị nwere ike ịnọ n'ụgbọ, ebe ọrụ, n'ụlọ anyị ma ọ bụ mgbe anyị na-ezukọ ma jiri uche na obi na-ekpe ekpere, na -achọkwa ka ịchọta ihe ndị furu efu. dị ike dịka ihe a na-eme na ụka.
Ekpere siri ike iji dọta nwoke